ဗေဒင် – Shwe Naung
ယခုလ အတွက် ရတနာပုံ ကိန်းဆိုက်ချိန်ရောက်နေတဲ့ တနင်္ဂနွေ နှင့် အင်္ဂါသားသမီးတွေ
Shwe Thuta | December 9, 2020
လာမည့် ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ(၁၃)ရက် ၊တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာ စံတော်ချိန် ညနေ ၅ နာရီ ၅၀ မိနစ်မှ ညနေ ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ်အတွင်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ ရတနာပုံကိန်း ဆိုက်သည်။ လာမည့် ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ(၁၅)ရက်၊အင်္ဂါနေ့မြန် မာစံတော်ချိန် ညနေ၅နာရီ၅၀ မိနစ်မှညနေ၆နာရီ ၁၀မိနစ်အတွ င်းအင်္ဂါ သားသမီးများ
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများ အတွက် တစ်ပတ်တာ ကံကြမ္မာ ဟောစာတမ်း (8-12-2020 မှ 14-12-2020 ထိ)
ခုနှစ်ရက်သားသမီးအား လုံးချိန် ဆနိုင်၍အကျိုးရှိြ ကပါစေ တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ ဒီတစ်ပ တ်မှာအ လုပ်နေရာ အိမ်နေ ရာပြောင်းရွှေ့ရခြင်း အိုးအိမ်ပြုပြင်ဆောက်လုပ်ရတက်ပါသည်။ ဧည့်ထူးဧည့်ကောင်းရောက်လာတက်သည်။ ရုတ်တရက်ရာထူးတိုးခြင်းစီးပွားတိုးတက်ခြင်းများကြုံရတက်ပါသည်။မိသားစုဝင်တစ်ဦးထွက်သွားတက်ပါသည်။ယားနာဖြစ်ခြင်းရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းများဖြစ်တက်ပါသည်။အချစ်ရေးမှာအပြောင်းအလဲများကြုံတွေ့ရတက်ပါသည်အကျိုးပြုသော အရောင်အစိမ်းရောင်အဖြူရောင်ဖြစ်ပါသည်။အကျိုးပေးဂဏန်း၄ဂဏန်း၂ဂဏန်းဖြစ်ပါသည်။ကံရဲ့အထောက်အပံ့ရရှိစေရန်(သစ္စာပန်းနှင့်သောက်တော်ရေ၅ခွက်အိမ်ဘုရားမှာလှူ၍လိုရာဆုတောင်းပါ။) တနင်္လာသားသမီးများ ဒီတစ်ပတ် မှာခရီးသွားလာရခြင်းကူ ညီမစပေးသူပေါ်ေ ပါက်ခြင်းများြ ကုံရတက်ပါသ ည်။လူရင်း မိတ်ဆွေတစ် ဦးရဲ့လိမ်လည်လှည့်ြ ဖားမှုခံရတက်ပါသတိထား ပါ။ငွေသောကဖြ စ်ခြင်းအလု ပ်နေရာပြောင်းရွှေ့ရခြင်းအမှု
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ အတွက် ဒီဇင်ဘာလ ( ၁ )လစာ ဟောစာတမ်း….
Shwe Thuta | December 1, 2020
ဒီဇင်ဘာ လ တစ်လစာေ ဟာစာတမ်းကို ဆရာစိုင်း‌‌ေ ကျာ်မင်း မှ ကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ မိတ်ေ ဆွတို့အနေဖြင့် ကံကြမ္မာအေ ကာင်း၊ အဆိုးများ /ဘာတွေဘ ယ်လိုဖြစ်နေလဲ ဆိုတာကို ဖတ်ရှုကြည့်ပြီး အများဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Like & Share ပေးကြပါ။ ခုနှစ်ရက်သား၊ သမီးများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး၊ ကောင်းခြင်းသုခအဖြာဖြာ နှင့်
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ အတွက် တစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း (ဆရာမင်းသိင်္ခ)
Shwe Thuta | November 30, 2020
ဆရာ မင်းသိင်္ခ၏ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် (၂၉.၁၁.၂၀) မှ (၅.၁၂.၂၀) ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း အားလုံး ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ရှယ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. ဗေဒင် ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ပညာရပ်အတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်.. စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပီး.. ကံအညံ့ အဆိုးများကိုလည်း ကျော်လွှားနိုင် ကြပါစေ.. Sunday Monday
ခုနှစ်ရက် သားသ မီးများ အတွက် တစ်ပတ် စာ ဟောစာတမ်း… 26.11.2020 မှ 2.12.2020 အထိ
Shwe Thuta | November 26, 2020
တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအ တွင်း လက်လွန်ထားတဲ့ ငွေတွေပြန်ရ လိမ့်မယ်။ စပ်တူအလုပ်များ၊ ရှယ်ယာအလုပ်များ တိုးတတ်လာဖွယ်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ကတော့ အားနည်းညံ့ဖျင်းပါတယ်။ မိန်းကလေးများ ဓမ္မတာနဲ့ ပတ်သက်သော ရောဂါတွေ ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ ရေချိုး မှားပြီး ချွေးငုပ်၊သွေးငုပ် ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေ တိုးတတ်ပါလိမ့်မယ်။ မိမိရင်ဆိုင်နိုင်ပါ့မလားလို့ သံသယဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ
ရက်ပေါင်း ၃၀ တစ်လလုံးမှာ ၂ ကြိမ်သာ လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ သောကကင်းစင် ငွေဝင်ငွေပွားအစီရင်…………
Shwe Thuta | November 19, 2020
တစ်လ မှာ ၂ ကြိမ်သာ လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ သောကက င်းစင်ငွေဝ င်ငွေပွားအစီရင်…သောကကင်း စင်ငွေဝင်အစီရင် ယုံကြည်စွာလု ပ်ဆောင်ပါက အကျိုးထူးများသည် သောကကင်းစင်ေ ငွဝင်ငွေပွားအစီရင် ယုံကြည်စွာလု ပ်ဆောင်ပါက အကျိုးထူးများ သည် မိတ်ဆွေများ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျားယခု ဆရာတင်ပေးမည့် အစီရင်လေးက မိမိရည်မှန်းစီမံထား သည့်အလုပ်ကိစ္စများ လုပ်ချင်တိုင်းမ လုပ်နိုင် ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်နိုင်ြ
ခုနှစ်ရက်သားသမီး တစ်ပါတ်စာ အထူးဟောစာတမ်း ယတြာ (၉.၁၁.၂၀၂၀ မှ ၁၅.၁၁.၂၀၂၀) အထိ
Shwe Thuta | November 10, 2020
တစ်ပတ်စာေ ဟာစာတမ်းစောင့်ေ မျှာ်နေကြသူလေးတွေ တွက် ဆရာအော င်ချစ်မင်းရဲ့ အားလုံးသောမိတ်ဆွေ များကျန်းမာချမ်း သာကြပါစေ တစ်ပါတ်စာ အထူးဟောစာတ မ်းဗေဒင်ဆရာက အညံ့တွေမြင်ရင်ေြ ပာပေးမှာပဲ မိတ်ဆွေတို့အတွ က်ရှောင်ရန်ဆောင်ရန် သိရတာေ ပါ့သိပ်ညံ့နေတ ယ်ဆိုလည်းယတြာလေးေ တွပြုလုပ်လို က်ပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်….. မိတ်ဆွေများ အထူးကံကောင်ကြပါစေ.. ဆရာအောင်ချစ်မင်း။ တနင်္ဂနွေသား/သမီးများအတွက် ဒီရက်ပိုင်းအ တွင်းစိတ်ေ လစိတ်နှစ်ခါဖြစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်သည်။
နိုဝင်ဘာလ တစ်လလုံးအတွက် တစ်လစာ အထူးဟောစာတမ်းဗေဒင်…ယတြာများ
Shwe Thuta | November 4, 2020
၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ အတွက် (၁)လစာအထူးဟောစာတမ်း..အားလုံးသောမိတ်ဆွေများကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ အထူးဟောစာတမ်းဗေ င်ဆရာကအညံ့တွေမြင်ရင်ပြောေ ပးမှာပဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်ရှော င်ရန်ဆောင်ရန်သိရတာေ ပါ့သိပ်ညံ့နေတ ယ်ဆိုလည်းယြ တာလေးတွေပြုလု ပ်လိုက်ပါအဆင်ပြေ သွားပါ လိမ့်မယ်…..မိတ်ဆွေများအထူးကံကောင်ကြပါစေ.. ဆရာအောင်ချစ်မင်း။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဒီလအတွင်းမှာ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ပြောရရင်တော့ ကံကြမ္မာက အကောင်းဘက်မှာ အလေးသာနေပါတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် ဘာကိုင်ကိုင် အဆင်ပြေမယ့် အချိန်ပဲ ဆိုပါတော့။
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ရဲ့ (၇) ရက်သားသမီးများ အတွက် တစ်ပတ် စာဟောစာတမ်း
Shwe Thuta | October 31, 2020
ဆရာမ င်းသိင်္ခ၏ (၇) ရက်သားသမီး များအ တွက် (၁.၁၁.၂၀) မှ (၇.၁၁.၂၀) ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ် စာဟောစာတမ်း အားလုံး ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ရှယ်ပေး နိုင်ပါတယ်.. ဗေဒင် ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ပညာရပ်အတိုင်း တွက်ချက် ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်..စိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပီး.. ကံအညံ့ အဆိုးများ
ခုနှစ်ရက် သားသမီး တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း(29.10.2020 မှ 4.11.2020 အထိ)
Shwe Thuta | October 29, 2020
၇ ရက် သားသမီးအပေါင်း ကောင်းသော လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေ…ဆရာငြိမ်းအေးလူ(ဗေဒင်သုတေသီ) တနင်္ဂနွေ ဒီကာလ မှာ လက်တေ လာဆောင်ရွ က်နေသော ကိစ္စကြောင့် ဝင်ငွေေ ကာင်းများ ရရှိတတ်ပါသည်။ လုပ်ငန်း သစ်တစ်ခု ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ ဉာဏ်နှင့် ယှဉ်သော ကြိုးစားအားထု တ်မှုများကြောင့် ဘဝအောင်မြင်မှု အသီးအ ပွင့်များကို ဆွတ်ခူးနို င်ဖွယ်မြင်သည်။ ရိုးသားစွာ
ဆွဲ‌ဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ခင်သဇင်ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး………
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်းအလှတရားတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ လုလုအောင်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…….
အတွင်းသားလေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ကပြထားတဲ့ မအေးသောင်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး……..
ဆက်ဆီကျကျ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ………
ဖွေးဥနုထွက်နေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……….
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……..